विश्वमा सबै भन्दा धेरै बिक्ने टुथपेस्ट Colgate को सफलता कथा – GoodNews24 – Good News24
Home/अन्य/विश्वमा सबै भन्दा धेरै बिक्ने टुथपेस्ट Colgate को सफलता कथा – GoodNews24
कोल्गेट दुनियाँमै सबै भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको मन जितेको र सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिने टुथपेस्ट हो । यो लगभग हरेक १०० घर मध्य ६६ घरमा कोल्गेट प्रयोग हुन्छ । तर के तपाइलाइ थाहा छ यति चर्चित ब्रान्डको सुरुवात कसरी भयो ? विश्वमा सबै भन्दा बढि बिक्ने टुथपेस्ट हो कोल्गेट । जसको सफलताको अन्दाज धेरै जसो घरमा टुथपेस्टलाइ टुथपेस्ट होइन कोल्गेट भनेर भनिन्छ । कुनै ब्रान्डको लागि यो भन्दा ठुलो सफलता अरु के हुन सक्छ ? कोल्गेट कम्पनीको सुरुवात आज भन्दा २१० बर्ष अगाडी सुरु भएको थियो र यस कम्पनीको सुरुवातकर्ता विलियम कोल्गेट थिए । जसले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै संघर्ष गरेका थिए । सुरुवातमा यस कम्पनिले टुथपेस्ट होइन साबुन बनाउने गर्दथ्यो । जव यस कम्पनीले टुथपेस्ट बनाउन सुरु गर्यो । त्यो समयमा टुथपेस्ट जारमा आउने गर्थ्यो ।
कोल्गेट फ़ाउण्डरको जन्म १७८२ जनवरी २५ मा इङ्ग्ल्याण्डको हलिङ्गबर्नमा भएको थियो । उनको पिताको नाम रोबर्ट कोल्गेट थियो । जो खेतमा काम गरेर आफु र आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्थे । केहि समय पछि उनका पिता इङ्गल्याण्डबाट अमेरिकामा पुरै परिवारको साथ बसाइ सरेका थिए । जहाँ उनले एक अमेरिकी नागरिकसंग मिलेर साबुन र मैन बत्ति बनाउने काम गरे र यस काममा विलियम कोल्गेट पनि सहयोग गर्ने गर्दथे । दुर्भाग्यबस यो बिजनेस सफल हुन सकेन । दुइ वर्ष पछि नै यो काम बन्द गर्नु पर्यो । यसकारण विलियमको परिवारमा आर्थिक संकट हुन थाल्यो र विलियमले १६ वर्षकै उमेरमा घर छोडेर काम गर्ने निर्णय गरे । केहि समय सानो सानो काम गरे पछि सन् १८०४ मा न्यु वर्क सिटि आएर साबुनको फ्याक्ट्रीमा काम गर्न सुरु गरे । त्यहाँ काम गर्ने क्रममा उनले व्यापार सम्बधि ज्ञान हासील गरे र उनले म पनि यहि बिजनेस गर्छु भनेर सोचेका थिए ।
दुइ वर्ष काम गरे पछि उनले त्यो कम्पनि छोडिदिए र १८०६ मा साबुन बनाउने आफ्नै सानो बिजनेस सुरु गरे । उनले त्यस कम्पनीको नाम विलियम कोल्गेट एण्ड कम्पनी राखेका थिए । उनको यो बिजनेसले राम्रो सफलता हात पार्यो । त्यहि समय उनलाई मुटुमा समस्या देखिन थाल्यो । स्वास्थ्यमा खराबी आएका कारण उनले केहि वर्ष बिजनेसमा ध्यान दिन सकेनन र उनको कम्पनि घाटामा चल्न थाल्यो । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि उनि फेरी बिजनेस तर्फ फर्किए अनि कम्पनीलाई फेरी नयाँ उचाइमा पुर्याए । विलियम कोल्गेट धार्मिक व्यक्ति थिए इश्वारमा आस्था राख्थे । उनि आफु सफल हुनुमा इश्वर प्रति आभार व्यक्त गर्दथे । त्यसैले उनले आफ्नो एकाउन्टेन्टलाइ इश्वरको नाममा एउट बैंक खाता खोल्न लगाए । जसमा उनि कम्पनीको फाइदा राख्दथे साथै त्यो पैसा राम्रो कामको लागि दान गर्ने गर्थे । उनको व्यापार बढे संगै उनले कम्पनीको फाइदाको ५०% दानमा दिन सुरु गरे । सफल बिजनेस म्यान बनेपछि १८५७ मार्च २५ मा उनको मृत्यु भयो ।
विलियमको मृत्यु पछि उनका तीन छोरा रोबर्ट जेम्स र स्यामुअलले कम्पनी सम्हाले । विलियमका तीन छोराले ओरल हाइजेनिकको लागि पहिलो टुथपेस्ट १८७३ मा लन्च गरे जो अहिलेको जस्तो ट्युबमा होइन जारमा आउने गर्दथ्यो । समय संगै यसको प्याकेजिङ्गमा पनि परिवर्तन आयो । १८९६ देखि यो टुथपेस्ट ट्युबमा आउन थाल्यो । सुरुमा साबुन मात्र बनाउने कम्पनीले पछि टुथपेस्ट,परफ्युम र शेभिंग क्रिम पनि बनाउन थाल्यो । १९२८ पछि यस कम्पनीले पाल्मोलिभ कम्पनिसंग मिलेर प्रोडक्ट बनाउन सुरु गर्यो । आजको समयमा यस कम्पनीमा हजारौ व्यक्तिहरुले काम गर्छन र यो दुनियाँको ५९ औं नम्बरमा पर्ने महँगो ब्राण्ड हो ।